Multivitamin: Kedu ihe ọ bụ? Olee uru ọ bara? Olee otú iji?
Overtraining: Kedu ihe ọ bụ? Olee otú ọ ghara overtrain? Kedu ihe mgbaàmà? Kedu ihe ị ga-eri?
Nri ndị Japan: Olee Otú O Si Arụ Ọrụ? Ọ nwere mmetụta ọ bụla? Mụta ihe niile banyere nke a ngwa ngwa arọ ọnwụ usoro!
ahụ ike	 1 December 2018
Multivitamin: Kedu ihe ọ bụ? Olee otú iji? Ọ dị mkpa maka ahụ?
Ahụ anyị chọrọ nri na-edozi ahụ iji dịrị mma na ahụike. Mana dịka ọ naghị arụpụta nri ndị a niile ọ chọrọ, anyị ga-enweta ha site na nri kwesiri ekwesi ma ọ bụ ọbụlagodi site na mgbakwunye, ọ bụ ya mere iji ọgwụ multivitamins ji na-adịwanye elu
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere multivitamin, isiokwu a bụ maka gị, nọnyere anyị ma jụọ ajụjụ gị niile gbasara ya!
Gịnị bụ multivitamin?
Multivitamins makwaara dị ka multivitamins bụ ogige dị mkpa nke vitamin dị mkpa maka ahụ anyị nke a na-ere iji gboo mkpa nke micronutrients mgbe nri enweghị ike iru mkpa nri niile.
N'adịghị ka ihe ọtụtụ mmadụ na-eche, ọ bụghị naanị na multivitamin na-eweta ụkọ nke vitamin, kamakwa ọ na-arụ ọrụ dị ka ihe na-enye ume mgbochi, na-enwe usoro mgbochi maka ọrịa dị iche iche ma meziwanye ndụ mmadụ.
Anyị nwere ike ịsị na vitamin dị iche iche na-enye ihe dị iche iche chọrọ maka vitamin na mineral nke ahụ chọrọ maka arụmọrụ ya zuru oke, mana nke ahụ anaghị arụpụta n'ime ahụ n'onwe ya ma anaghị erikarị ya n'ihi ụdị nri dị iche iche.
Na mkpokọta, ahụ anyị chọrọ ihe karịrị 15 mineral na ọ ga-abụkarị ihe na-agaghị ekwe omume iji nweta ha site na ịdị mma ha na oke ha, nke na-eme ka ahụ nwee ọtụtụ iron, chromium, magnesium, copper, iodine, selenium, zinc, calcium , manganese na ndị ọzọ, na-enye ohere maka ọtụtụ mmetọ na ọrịa.
Ọ bụ ya mere iji vitamin na mineral supplementation ji dị mkpa.
Kedu uru nke multivitamin?
N'ibughi n'uche ogige niile nke multivitamin, anyị ga-ekpughere ụfọdụ isi uru achọtara site na iji ya:
Mma ọhụụ, anụ ahụ, ezé na mbọ, ekele Vitamin A;
Ọrụ ka mma nke nkwonkwo yana nke usoro ọbara na-ekesa;
Na-egbochi hormone cortisol nke jikọrọ ya na catabolism;
Mgbapụta nke hormone nke uto;
Brainbụrụ ka mma na omume obi;
Mbelata nke free free radicals, nke bụ mmadụ na-awakpo ahụ;
Nweghachi nke sel, ọ kachasị site na ihe vitamin A na D na nhazi nke mkpụrụ ndụ ọhụrụ;
Optimization nke metabolism ka ọ na-dere vitamin si B mgbagwoju anya.
N'ozuzu, enweghị nchegbu banyere otu esi eji multivitamins, mana naanị ndụmọdụ iji nweta ihe kacha mma na multivitamin bụ iji ya na-eme kwa ụbọchị.E nwere nri siri ike, nke kachasị mma maka abụba, n'ihi na vitamin A, D, E na K bụ ndị nwere ike ịgbaghasị ọkachasị n'ụdị edozi a, na ihe ọghọm nke afọ na-ebute nwere ike inye aka na ntigbu nri ma kwado mbibi na ịmịkọrọ nri niile ndị ọzọ dị na multivitamins
Iji mekwuowanye ojiji nke ngwaahịa a, a na-atụ aro ka ị jiri ya mgbe ọzụzụ maka nri mbụ gị, na-arapara n'usoro oge ọ bụla enwere ike.
Ihe atụ nke nri siri ike na abụba iji were multivitamin:
Riz na anụ uhie;
Pancake na ahụekere peekere na banana;
Omelet tinyere akwa dum na oatmeal.
Mana ọ dị mkpa ịkpọtụrụ dọkịta mgbe niile, n'ihi ya, ọ nwere ike ịgwa gị ụzọ kachasị mma iji jiri onyinye a nke vitamin na mineral mee ka mmụba nke uru ya bawanye.
O onye lavitan bụ vitamin zuru ezu, yana ihe karịrị afọ 10 n'ahịa na nke ahụ bụ otu n'ime ụdị ndị a kacha eji eme ihe na mba ahụ.
Lavitan na-enye multivitamin karịsịa maka ụdị ebumnuche ọ bụla, na enweghị obi abụọ ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma taa, ebe ị ga-enwe ngwaahịa mgbe niile nwere nri na-edozi ahụ gị chọrọ n'oge a.
Uzo ozo na - eduga na multivitamins bu Centrum, nke nwere vitamin na mineral zuru ezu iji zute ụdị ahụ ọ bụla dị mkpa.
Site n'iji ngwaahịa a ọ ga-ekwe omume na ịnwere ngwakọta zuru oke iji gboo mkpa ahụ gị.
Kedu multivitamin m kwesịrị ịhọrọ?
Ma Lavitan na Centrum bụ ọgwụ magburu onwe ya. Ya mere, nke ọ bụla n'ime ụdị abụọ a ga-enyere gị aka iweta nsonaazụ ndị a na-atụ anya ya, agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ banyere nke kachasị mma, anyị na-atụ aro ka ị nyochaa nke kachasị mma maka mkpa ahụ gị.
A ka nwere ajụjụ ọ bụla? Hapụ ikwu!
Omume iji felata n’ụlọ: Ndụmọdụ dị ịtụnanya maka ịmalite imega ahụ taa!
Mmanụ Ojon: Ngwaahịa Ebube maka ntutu Gị! [Nweta ebe a]
9 ọgwụ ndị na-ewu ewu anabolic na Brazil: Chọpụta ihe ha bụ!